ဘုရားရှိခိုးသံကျယ်သဖြင့် တစ်လမ်းတည်းနေ အိမ်နီးနားအချင်းချင်းစကားများကြရင်း သည်းမခံနိုင်ဖြစ်ကြရာမှ… See more – Messi Club
ဘုရားရှိခိုးသံကျယ်သဖြင့် တစ်လမ်းတည်းနေ အိမ်နီးနားအချင်းချင်းစကားများကြရင်း သည်းမခံနိုင်ဖြစ်ကြရာမှ… See more
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ဘုရားရှိခိုးသည့် အသံကျယ်သည့်ကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ ဓားဖြင့်ခုတ်မှု ည ၇ နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။ဖြစ်စဉ်မှာ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (၂) ရပ်ကွက်နေ
ဒေါ်…. (၆၆ နှစ်) သည် နေအိမ်၌ရှိနေစဉ် ၎င်း၏သမီးများဖြစ်သည့် မ….. (၃၂ နှစ်) နှင့် မစန်းစန်းအောင်တို့မှာ တစ်လမ်းတည်းနေ သန်းထွန်းဝင်း (၄၅ နှစ်) ဆိုသူနှင့်ရန်ဖြစ်နေကြောင်းသိရသဖြင့်
သွားရောက်ကြည့်ရှုမေးမြန်းရာ မစန်းစန်းအောင်မှာ ဘုရားရှိခိုးရာတွင် အသံကျယ်သည်ဟုဆိုကာ သန်းထွန်းဝင်းက အော်ဟစ်ပြောဆိုနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ယင်းနောက် ဒေါ်…. (၆၆ နှစ်) မှ မစန်းစန်းအောင်အား နောက်ဘုရားရှိခိုးရင် ဓမ္မာရုံ၌ ရှိခိုးရန်ပြောဆိုနေစဉ် သန်းထွန်းဝင်းက နားညည်းတယ်ဟုပြောဆိုပြီး ညစ်ညမ်းစွာဆဲဆိုကာ နေအိမ်အတွင်းမှအရှည် ၂၈ လက်မခန့်ရှိ ဓားရှည်အားယူ၍
လိုက်ခုတ်ရာ မ… (၃၂ နှစ်) ၏ ကျောကုန်းနှင့် ဝဲ/ယာလက်၊ ခြေခုံတို့တွင် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထိုသို့ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် မ….(၃၂ နှစ်) မှာ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာ (မစိုးရိမ်ရ) အဖြစ် တင်ပို့ကုသထားရကြောင်း သိရသည်။
ဘုရားရှိခိုးရာတွင် အသံကျယ်သဖြင့် ဓားဖြင့်လိုက်ခုတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့မရဲစခန်းက ၃၂၆/၂၉၄ ဖြင့်အမှုဖွင့်ထားပြီး ကျူးလွန်သူအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ဘုရားရှိခိုးသံကျယ်သဖြင့် တစ်လမ်းတည်းနေ အိမ်နီးနားအချင်းချင်းစကားများကြရင်း သည်းမခံနိုင်ဖြစ်ကြရာမှ… See more
ယင်းနောက် ဒေါ်…. (၆၆ နှစ်) မှ မစန်းစန်းအောင်အား နောက်ဘုရားရှိခိုးရင် ဓမ္မာရုံ၌ ရှိခိုးရန်ပြောဆိုနေစဉ် သန်းထွန်းဝင်းက နားညည်းတယ်ဟုပြောဆိုပြီး ညစ်ညမ်းစွာဆဲဆိုကာ နေအိမ်အတွင်းမှ အရှည် ၂၈ လက်မခန့်ရှိ ဓားရှည်အားယူ၍